Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Isilumkiso soMhlaza: Isitshisa sinokuba yingozi
Kule veki, iMelika ifumanise ukuba iGERD okanye iGastroesophageal Reflux Disease ngunobangela wokucocwa komqala kaMongameli Biden. Ngokuqhelekileyo, iimpawu zeGERD aziqapheli kakhulu. Yaye oko kunokuba yingozi.
Isifo seReflux singakhokelela kuMhlaza womqala. Ukucocwa komqala, umqala obuhlungu, ilizwi elirhabaxa, ukukhohlela okuzingileyo, ukuminxa xa ulele, nokukhukuliseka kwamazinyo kuphakathi kweempawu ezingaziwayo zeGERD. Ukubetha kwentliziyo lolona phawu wonke umntu alwaziyo.
Kubantu abaninzi baseMelika, ezi mpawu kuphela isilumkiso sabo sokuba basengozini yomhlaza.
Le yiVeki yoKwazisa nge-GERD - eyenzelwe ukuhambelana nokutya koMbulelo. Kodwa akudingeki ukuba utye kakhulu ukuze ufumane i-GERD kunye nomngcipheko onokuthi ube nawo kwimpilo yakho.
Iipilisi Zisenokungabi Yimpendulo
Abaninzi babona isitshisa njengenyaniso yobomi kwaye basebenzisa amayeza afumaneka ngaphandle kwekhawuntara ukuthomalalisa iimpawu zabo. Ngelishwa, ukukhululeka kweempawu akuphelisi umonakalo obangelwa yi-asidi yesisu kunye ne-bile.
Iyeza alikunqandi ukutshizwa kwesiqulatho se-caustic esiswini esinokubangela imeko yangaphambi komhlaza eyaziwa ngokuba yi-Barrett's Esophagus. Oko kwenzeka xa umgca we-esophagus yakho utshintsha ukuze ufane nesisu sakho. Kwabanye, kubangela ukuqhubela phambili okubulalayo kwi-Cancer Esophageal.
Musa ukungayihoyi iAlam
I-Barrett's Esophagus ayibangeli zimpawu. Oko kuthetha ukuba iimpawu zeGERD inokuba sisilumkiso sakho kuphela - kwaye inokuba ngundoqo ekusindiseni ubomi bakho!
Xa ubanjwe kwangethuba, uMhlaza womqala woMqala unokuthintelwa. Iinkqubo zokunyanga ngaphandle zinokuphelisa izicubu zikaBarrett kwaye zinqande umhlaza ngaphambi kokuba uqale.
Izigidi zabantu baseMelika bane-Barrett's Esophagus ngoku - kwaye abayazi.
Amaxesha amaninzi, njengoko kwakunjalo kumyeni wam, izigulane ezinoMhlaza womqala azifumani ukuba zinengxaki de ngequbuliso zingakwazi ukuginya. Bakuba befikelele kwelo nqanaba, kuba nzima ukusinda. Mnye kuphela kwabahlanu abantu abafunyaniswa benoMhlaza weEsophageal oyakuphila iminyaka emihlanu.
Kungenxa yokuba esi sifo sihlala sibanjwa emva kwexesha kangangokuba unyango alufane lusebenze.
Kodwa inokubanjwa kwangoko - kwaye ithintelwe.
Okokuqala, abaguli baseMelika ngoku banokufumanisa lula umngcipheko wabo. Ukuginya okukhawulezayo kwesixhobo se-EsoCheck sobungakanani beepilisi kunika itshekhi elula nefikelelekayo yommizo wabo. Uvavanyo lwe-EsoGuard lusebenzisa i-DNA ukuvavanya ubukho beBarrett's Esophagus.
Uvavanyo luyafumaneka kwii-ofisi zoogqirha nakumaziko ovavanyo ePhoenix, eLas Vegas, eDenver, naseSalt Lake City – iindawo ezininzi ezicetywayo kwiinyanga ezizayo. Funda ngakumbi EsoGuard.com.
Ngombulelo, abaninzi abantu abane-GERD abayi kuba nomhlaza.
Kodwa esi ayisosifo onokuthi usishiye ngethamsanqa.
Ukujongwa sesona sipho sikhulu unokusinika abo ubathandayo.
Khawubuze nje amawaka eentsapho ezifana nezam ukuba uMhlaza weEsophageal ushiye nesihlalo esingenanto ngexesha leeholide.
Mindy Mintz uMordekayi ngumseki we-Esophageal Cancer Action Network, Inc. (ECAN). Walahlekelwa ngumyeni wakhe ngenxa yoMhlaza we-Esophageal xa abantwana babo beneminyaka elithoba elineshumi elinesibini kuphela.